17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့် (630-56-8) HPLC≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အမျိုးသမီးဟော်မုန်း / 17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ 17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့် (630-56-8) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်, နီးပါး 500,000 ကလေးငယ်တစ်ဦးချင်းစီနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစေ့ဘဲမွေးဖွားနေကြသည်။ 37 ရက်သတ္တပတ်ကိုယ်ဝန်ထက်လျော့နည်းစေ့ဘဲကလေးမွေးဖွား (PTB), သို့မဟုတ်မွေးဖွားသေခြင်းတရား၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်မှာမွေးကင်းစကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်ကလေးများအတွက်ရေရှည်အာရုံကြောမသန်စွမ်းများ၏ဦးဆောင်အကြောင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် PTB-related ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်အမေရိကန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်ထက်ပိုမို $ 26 ဘီလီယံအထိနှစ်စဉ်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ PTB ကာကွယ်ခြင်းတိုင်းပြည်အနှံ့မွေးကင်းစများ၏ရေရှည်ကျန်းမာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးမြှင့်တင်ရေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
I.17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: 17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 119 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
II ကို။ 17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်သံသရာ
1 ။ အမည်များ:
ဓာတုအမည်များ: 17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်
အခြားအမည်များ: 17-OHPC, 17P, hexanoate
2 ။ 17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်သုံးစွဲမှု:
အဆိုပါမူးယစ်ဆေး 17-alpha-hydroxyprogesterone caproate တစ်ခုထိုးဆေးဒြပ် progestin ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ပိုဆိုးမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ပြီးတာနဲ့ကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်အလိုအလျောက်စေ့ဘဲ birth.1 တစ်သမိုင်းနှင့်အတူအမျိုးသမီး Singleton ကိုယ်ဝန်အတွက်စေ့ဘဲကလေးမွေးဖွားမှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်သို့မဟုတ် delay လုပ်ခြင်းအတွက်ထိရောက်သောသက်သေပြခဲ့ပြီးယခုတစ် branded ဗားရှင်း (Makena; AMAG ဆေးဝါး) ရှိပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကုန်ကျကြောင်း 100 မူလထက်အဆကျပို။ ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2011 တွင်, ကေဗွီဆေးဝါးကုမ္ပဏီ (နောက်ပိုင်း Lumara အမည်ပြောင်း) ကမူရင်းပိုဆိုးရေးဆွဲရေးမှာတွေ့ရှိကဲ့သို့တူညီသောတက်ကြွပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ရေးစပ်သောထုတ်လုပ်ဖို့အမေရိကန်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုကနေခွင့်ပြုချက်နှင့်စျေးကွက် Makena, ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါခွင့်ပြုချက်တစ်ခုမိဘမဲ့မူးယစ်ဆေးသတ်မှတ်ရေးထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကေဗွီဆေးဝါးကုမ္ပဏီအလားအလာမြင့်မားစာရင်းစျေးနှုန်းမှလှူဒါန်းခဲ့ရာ Makena, ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်သီးသန့်အခွင့်အရေးများကိုပေးတော်မူ၏။ ဒီလေ့လာမှုအဘို့ကျနော်တို့ (မ Medicaid ကို) နီးပါး 17 စီးပွားဖြစ်အာမခံကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအကြား 4000-alpha-hydroxyprogesterone caproate ဘို့ဆေးညွှန်းဆနျးစစျဖို့ဒေတာဘေ့စမလုပ်ပဲတစ်ဦးအာမခံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအသုံးပြုခြင်း, ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ branded နှင့်ပိုဆိုးဗားရှင်း၏ရလဒ်များကိုနားလည်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
3.What 17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်များ၏သောက်သုံးသောပါသလဲ
250 (တိုင်း7ရက်) အပတ်စဉ်တစ်ချိန်က mg; 16 ရက်သတ္တပတ်,0ရက်ပေါင်းနှင့် 20 ပတ်ကိုယ်ဝန်၏6ရက်ပေါင်းအကြားကုထုံးကိုစတင်; ရက်သတ္တပတ် 37 ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပေါ်ကိုမဆိုကိုယ်ဝန်သို့မဟုတ်ပို့ဆောင်မှု၏ (36 ရက်သတ္တပတ်မှတဆင့်6ရက်) သည်အထိဆက်လက်။
ကျနော်တို့အလိုအလျောက်စေ့ဘဲဖြန့်ဝေတဲ့မှတ်တမ်းတင်သမိုင်းနှင့်အတူကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများပါဝင်သောတစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 19P ၏ 16 မီလီဂရမ်၏အပတ်စဉ်ထိုးသို့မဟုတ်အာဂွန်ရေနံရလဒ်များအရအိပ်ယာ၏အပတ်စဉ်ထိုးဖြစ်စေလက်ခံရရှိရန်, 20 အချိုး; အမျိုးသမီးများနေ့ကိုယ်ဝန်၏2ရက်သတ္တပတ်မှ 1 မှာ 250 လက်တွေ့စင်တာများမှာစာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်ကျပန်းဗဟိုဒေတာစင်တာကတာဝန်ပေးအပ်တစ် 17 အတွက်ခဲ့ကြသည် ထိုးဆေးပေးပို့သည်အထိသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်၏ 36 ရက်သတ္တပတ်ဆက်လက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမူလတန်းရလဒ်ကိုကိုယ်ဝန်၏ 37 ရက်သတ္တပတ်မတိုင်မီစေ့ဘဲဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ analysis ရည်ရွယ်ချက်ကို-to-အားရစရာနိယာမအရသိရသည်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
ယင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စုတစ်စုအတွက်အဓိကချို့ယွင်းအုပ်စုတစ်စုအတွက် 310 အမျိုးသမီးများ၏ base-line ကိုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် 153 အမျိုးသမီးတွေအလားတူခဲ့ကြသည်။ , (17 [37 ရာခိုင်နှုန်းကယုံကြည်စိတ်ချမှုကြားကာလ, 36.3 မှ 54.9] ဆွေမျိုးအန္တရာယ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအုပ်စု 0.66 ရာခိုင်နှုန်းကို vs. သည့်ချို့ယွင်းသောအုပ်စုတွင်ဖြစ်ပွားမှု, 95 ရာခိုင်နှုန်း) 0.54P နှင့်အတူကုသမှုသိသိသာသာကိုယ်ဝန်၏ 0.81 ရက်သတ္တပတ်ထက်လျော့နည်းမှာဖြန့်ဝေမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချ နှင့်ကိုယ်ဝန်၏ 35 ရက်သတ္တပတ်ထက်လျော့နည်းမှာဖြန့်ဝေ (20.6 ရာခိုင်နှုန်းကို vs. 30.7 ရာခိုင်နှုန်းခန့်; ကိုယ်ဝန်၏ထက်နည်း 0.67 ရက်သတ္တပတ် (ဆွေမျိုးစွန့်စားမှု, 95 [0.48 ရာခိုင်နှုန်းကယုံကြည်စိတ်ချမှုကြားကာလ, 0.93 မှ 32] ဖြစ်ပွားမှု, 11.4 ရာခိုင်နှုန်းကို vs. 19.6 ရာခိုင်နှုန်း) မှာဖြန့်ဝေ ; ဆွေမျိုးစွန့်စားမှု, 0.58 [95 မှ 0.37 ရာခိုင်နှုန်းကယုံကြည်စိတ်ချမှုကြားကာလ, 0.91]) ။ 17P နဲ့ကုသအမြိုးသမီးမြား၏မွေးကင်းစ enterocolitis, intraventricular သွေးလွန်နှင့်ဖြည့်စွက်အောက်စီဂျင်ဘို့လိုအပ် necrotizing ၏သိသိသာသာနိမ့်နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။
4.How Cortexolone 17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်?
17α-hydroxyprogesterone caproate (17-OHPC) ဓာတု progestogen ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ် caproate မော်လီကျူးစေမထားဘူး။ caproate များအတွက်အခြားအမည် hexanoic (သို့မဟုတ် caproic) အက်ဆစ်ကနေဆင်းသက်လာတစ်ခု Ester ဖြစ်သည့် "hexanoate" ဖြစ်ပါတယ်။ 17-OHPC ၏ဖော်မြူလာကတော့ပုံထဲမှာဖော်ပြပါတယ်။ တချို့ကဆေးသမား 17-OHPC ဆိတ်တွေ့သောဖော်ပြထားပါပြီ။ ဒီသဘာဝခန္ဓာကိုယ်အရည်များ, ဆိတ်ကနေတစ်ရှူး, သို့မဟုတ်အခြားသက်ရှိကနေဒီမော်လီကျူး၏မှတ်ပုံတင်တဲ့စာပေရှာဖွေရေးအတွက်အတည်မပြုနိုင်သောကွောငျ့, တစ်ဦး folktale ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
တစ်ဦးတည်းကကုသမှုမရှိဘူးထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု vs 17-OHPC လက်ခံရရှိရန်လျာထားသူ≥ 1 စေ့ဘဲကလေးမွေးဖွားတဲ့သမိုင်းနှင့်အတူလူနာအတွက်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအရှည်ပေါ် 17-OHPC ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအရှည်တိုင်းတာခြင်းမရှိခြားနားချက် 17-OHPC လက်ခံရရှိသူကိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, အင်္ဂါဇာတ်အဓိကချို့ယွင်းစေ့ဘဲကလေးမွေးဖွားသို့မဟုတ်အချိန်မတန်မီသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအတိုကောက်တစ်သမိုင်းနှင့်အတူလူနာအတွက်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအတိုကောက်နှုန်းလျှော့ချ။
17 alpha-hydroxyprogesterone caproate (17P) ယခင်တစ်သမိုင်းရှိသည် Singleton ကိုယ်ဝန်နှင့်အတူအမျိုးသမီး PTB ၏ထပ်မဖြစ်အောင်လျှော့ချရန်ပြသထားပြီးကြောင်းအဓိကချို့ယွင်းတဲ့ဒြပ်သဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။ PTB ၏ယခင်သမိုင်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ရှိသည်မဟုတ်သောမိန်းမတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အခြားစေ့ဘဲကလေးငယ်ကိုရှိသည်ဖို့ကပိုများပါတယ်။ အများအားဆရာဝန်များကသတ်မှတ်, 17P ပေးပို့သည်အထိ 16-24 ရက်သတ္တပတ်မှာစတင်အပတ်စဉ်ထိုးမှတဆင့်အုပ်ချုပ်သည်။ လေ့လာရေးအနေနဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီမိန်းမအား 17P စီမံခန့်ခွဲ 33 ရာခိုင်နှုန်းအခြား PTB ရှိခြင်း၏အခွင့်အလမ်းကိုလျော့နည်းစေကြောင်းပြသပါ။ နှစ်စဉ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်, 30,000 ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာအရည်အချင်းများဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့် 17P များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီစဉ်းစားနေကြသည်။
(ဒီအသုံးပြုမှုအတွက် FDA ကကမိဘမဲ့မူးယစ်ဆေး designated) Singleton အလိုအလျောက်စေ့ဘဲကလေးမွေးဖွားတဲ့သမိုင်းရှိခြင်းတစ် Singleton ကိုယ်ဝန်နှင့်အတူအမျိုးသမီးစေ့ဘဲကလေးမွေးဖွား၏အန္တရာယ်၏လျှော့ချရေး။
ထိရောက်မှုကိုယ်ဝန်၏ <37 ရက်သတ္တပတ်မှာကယ်နှုတ်သောသူအမြိုးသမီးမြား၏အချိုးအစားအတွက်တိုးတက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ထား; တိုက်ရိုက်လက်တွေ့အကျိုးခံစားခွင့် (မွေးကင်းစကလေးများရောဂါနှင့်သေဆုံးနှုန်းအတွက်ဥပမာတိုးတက်မှု) ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်မဟုတ်။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ထိရောက်မှုတစ်ကြိုတင်အလိုအလျောက် Singleton မွေးဖွားနှင့်အတူအမြိုးသမီးမြားကိုသာသရုပ်ပြ; မျိုးစုံကိုယ်ဝန်သို့မဟုတ်စေ့ဘဲကလေးမွေးဖွားအခြားအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အတူအမျိုးသမီးအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ဘူး။
ACOG ကြောင့်အလိုအလျောက်စေ့ဘဲလုပ်အားသို့မဟုတ်အမြှေးပါးအချိန်မတန်ကှဲထှကျဖို့ကိုယ်ဝန်၏ <37 ရက်သတ္တပတ်မှာ Singleton ကိုယ်ဝန်နှင့်ကြိုတင်အလိုအလျောက်စေ့ဘဲကလေးမွေးဖွားနှင့်အတူအမျိုးသမီးမှုများထပ်တလဲလဲစေ့ဘဲကလေးမွေးဖွား၏ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အဓိကချို့ယွင်းဖြည့်စွက်ရာပူဇော်သက္ကာကိုအကြံပြုသည်။
6.17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်:
7.17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း:
8.17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်ဈေးကွက်:
9.Does 17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်မဆိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား?
ဒြပ် progestin; caproic အက်ဆစ်နှင့်အတူ, 17α-hydroxyprogesterone ၏ esterification, အဓိကချို့ယွင်းတဲ့သဘာဝဖြစ်ပေါ် metabolite အားဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ခိုင်မာတဲ့ progestogenic လှုပ်ရှားမှုရှိပါတယ်; အဓိကချို့ယွင်းထက် endometrium အပေါ်တစ်ဦးမဟုတ်တော့တည်တံ့နှင့်ပိုပြီးအစွမ်းထက် progestational အကျိုးသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ရန်ပုံပေါ်ပါတယ်။
အန်ဒရိုဂျင်, antiandrogenic, အီစရိုဂျင်, ဒါမှမဟုတ် glucocorticoid လှုပ်ရှားမှုရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါဘူး။
III ကို။ 17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့် HNMR
IV ။ AASraw ထံမှ 17-Hydroxyprogesterone caproate အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဘယ်လိုနေသလဲ?
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Clenbuterol သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို / nandrolone အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတွက်အသုံးပြု nandrolone အမှုန့်ဆိုတာဘာလဲ?
Hydralazine HCL အမှုန့်